लकडाउन पछि: किन सबै समावेशी बिदा छनौट गर्नुहुन्छ?
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकिंग यात्रा समाचार » लकडाउन पछि: किन सबै समावेशी बिदा छनौट गर्नुहुन्छ?
ब्रेकिंग यात्रा समाचार • अतिथि सत्कार उद्योग • होटल र रिसोर्टहरू • लक्जरी समाचार • उद्योग समाचार बैठक • समाचार • रिसोर्ट्स • रोमान्स विवाह हनीमून • सुरक्षा • किनमेल • पर्यटन • यात्रा सम्झौता | यात्रा सल्लाहहरू • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • विभिन्न समाचार
अप्रिल 10, 2020
14 मिनेट पढ्ने
सबै समावेशी रिसोर्ट्स - स्यान्डल रोयल बार्बाडोस
एक दिन यो COVID-१ cor कोरोनाभाइरस हाम्रो पछाडि हुनेछ, र लकडाउनहरू विश्वभरि उठाइनेछ। जब यो हुन्छ, के तपाइँको चीजहरूको सूचीमा यात्रा हुनेछ? के एक थोरै समावेशी बिश्वको लागि एक समावेशी छुट्टीको जवाफ हुन सक्छ?
एक सबै समावेशी बिदा संग, तपाईं वास्तव मा आफ्नो जीवन कोशिका कायाकल्प गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो प्राण कायाकल्प गर्दै। तपाईंले कुनै चीजको बारेमा सोच्न आवश्यक पर्दैन - कहाँ जानुहुन्छ वा के अर्डर गर्ने होईन ... बस केवल रमाइलो गर्नुहोस्। यस्तो छुट्टीको लागि शीर्ष सबै समावेशी गन्तव्यहरू मध्ये एक हो सैंडल रिसोर्ट्स र समुद्र तटहरू। तिनीहरू घाम र खुशी र लापरवाह छन्। र केवल एक स्थानमा केन्द्रित गर्न, बार्बाडोसमा सबै समावेशी छुट्टीमा एक नजर राखौं।
बारबाडोस धेरै चीजहरूको लागि परिचित छ, र यदि तपाइँ एक स्थानीयलाई सोध्नुभयो भने, तिनीहरूले तपाइँलाई बताउनेछन् कि बार्बाडोसको लागि सब भन्दा प्रख्यात चीजहरू हुन् रिहाना, यसको नेशनल डिश कु कु र फ्लाइ Fish फिश, र क्रप ओवर। सबै तीनवटा बार्बाडोस टापुलाई सबैभन्दा धेरै चिनिने महत्त्वपूर्ण चीजहरू मध्येका हुन्, तर त्यहाँ अन्य धेरै छन्, यस टापुलाई रमको जन्मस्थल मानिन्छ, र यसलाई "लस बार्बाडोस" भनेर चिनिन्थ्यो। त्यस पछि थप ...
जे भए पनि, बजानको छुट्टी हुनु अघि, तपाईंले सक्दो सबै सिक्नको लागि यो बुझ्दछ, ताकि भ्रमणको क्रममा तपाईलाई राम्ररी बुझ्नु पर्छ कि किन चीजहरू उनीहरूकै तरिकाबाट हुन्छन्। क्यारिबियनमा सब भन्दा राम्रो छुट्टी लिनेहरूको रूपमा, त्यहाँ छिटो त्यहाँ केही समुद्र तट कार्यवाही गर्न नबिर्सनुहोस्, र अरू सबै गतिविधिहरू जुन तपाईंलाई सब भन्दा राम्रो क्यारिबियन जीवन बिताउन मद्दत गर्न सक्छ, यदि केहि दिनको लागि मात्र!
ट्रपिकल समुद्र तटहरू
क्यारिबियन यसको भव्य समुद्र तटबिना के हुन्छ? थोरै कम मंत्रमुग्ध, तर अझै शुद्ध स्वर्ग! भाग्यवस, तपाईले बार्बाडोसमा समुद्री तट-कम वाइब्सको अनुभव गर्नुपर्दैन। वास्तवमा, यस टापु क्यारेबियनमा सबैभन्दा धेरै विविध समुद्र तटहरू भएको कारण चिनिन्छ, जहाँ तपाईं आराम गर्न र आराम गर्न सक्नुहुनेछ, कछुवाको साथ स्नोर्कल, वा केही पानी खेलकुद कार्यमा लिन सक्नुहुन्छ। शान्त अवस्थाका लागि पश्चिम र दक्षिण तटमा समुद्र तटहरू, र पूर्वी तटमा समुद्र तटहरू प्रयास गर्नुहोस् यदि तपाईं कल्पना गर्नुहुन्छ केही छालहरूमा सवारी गर्ने। त्यस बखत तलको अनुभागमा!
आन्तरिक सल्लाह: समुद्र तटमा असीमित ककटेलहरू मनपर्छ? स्यान्डलले बार्बाडोसमा दुई सबै समावेशी रिसोर्टहरू प्रस्ताव गर्दछ, स्यान्डल रोयल बार्बाडोस र स्यान्डल बार्बाडोस दुबै बीच बीचमा अवस्थित छन्, जहाँ तपाईंसँग पहिले उत्तम डाईड स्पटहरूमा पहिलो-डिब्स हुन सक्छ। एक स्यान्डल रिसोर्टका पाहुनाहरूले सुविधाहरू र दुबै रिसोर्टहरूको रेष्टुरेन्टहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्!
सर्फ शानदार छ!
क्यारिबियन सर्फिंग भीडको साथ लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ, र बार्बाडोस जस्ता टापुहरू अग्रस्थानमा छन्। यस टापुको दक्षिण र पूर्वी तटहरू छन् जहाँ तपाईं सबैभन्दा ठूलो छालहरू पाउन सक्नुहुन्छ, र प्राय: सर्फिंग प्रतियोगिताहरू पनि। नोभेम्बरदेखि जून नै छालहरूको सवारीको लागि उत्तम समय हो, र दक्षिणी तट प्राय: सर्फरहरूको लागि प्राथमिकता हो जसले रेस्टुरेन्ट र मनोरन्जनको लागि द्रुत पहुँच चाहान्छन्। ओस्टिनको शहर नजिक, फ्रेट्स बे दक्षिण तटमा एक आश्रय खाडी हो जुन सर्फर्सले आफ्नो अपतटीय बतासहरूको कारण रमाइलो गर्दछ। ब्रिजटाउन नजिकै ब्रान्डेन पनि राम्रो स्थान हो, सबै सीप तहका सर्फरहरूको लागि आदर्श। पूर्वी तटमा रहेको सूप बाउल, बतशेबाले आफ्नो प्रख्यात कमाएको छ, जसरी दक्षिण तटमा सर्फिंग दक्षिण प्वाइन्ट छ। पश्चिमी तटमा ब्याट्स रक र ट्रोपिकाना, र उत्तर पश्चिममा म्याकक्स पनि एक स्पिन लायक छन्। यदि तपाईं यी समुद्री तटहरूमा हेर्न सर्फ गर्नुहुन्न भने, राम्रो कम्पनीको साथ सबै समावेशी बिदामा रमाउन पिकनिक टोकरी ल्याउन राम्रो विचार हो।
बार्बाडोस रमको जन्मस्थल हो
यदि त्यहाँ कुनै टापु छ कि रमको उत्पत्ति भएको ठाउँ भएको दाबी गर्न सक्दछ भने, यो बार्बाडोस हो। विशेष गरी माउन्ट गे डिस्टिलरीहरू १ 1703०1,500 देखि बार्बाडोसमा रमको मंथन गर्दै आएको छ। डिस्टिलरी संसारमा सब भन्दा पुरानो रम उत्पादन गर्दछ। यस टापुमा १,XNUMX०० भन्दा बढी रम पसलहरू, र फोर्टस्क्वायर डिस्टिलरीहरू र सेन्ट निकोलस अबे सहित अधिक डिस्टिलरीहरू छन्; एक वृक्षारोपण घर, संग्रहालय र रम डिस्टिलरी। होस् वा छैन तपाईंसँग पहिले नै मनपर्ने रम मिक्स छ, सम्भावनाहरू यो हुन्छ कि तपाईंले बार्बाडोसमा राम्रो पाउनुहुनेछ।
बार्बाडोस कुनै समय बेलायती थियो तर अब एक स्वतन्त्र टापु देश हो
बार्बाडोस एक समय बेलायती थियो, र टापु १ 1966 ;1627 मा स्वतन्त्र भयो; यो पहिलो चोटि १ 1961२XNUMX मा बेलायतीहरूले कब्जा गरेपछि भएको थियो। यसको स्वतन्त्रता हुनुभन्दा अघि १ XNUMX in१ मा आन्तरिक स्वायत्तता नहोउन्जेल यो टापु एउटा बेलायती उपनिवेश थियो। आज पनि टापु स्वतन्त्र भए पनि बार्बाडोसको बेलायती राजतन्त्रसँग नजिकको सम्बन्ध छ, जुन गभर्नर जनरलले प्रतिनिधित्व गर्दछ। रानी बार्बाडोसको राज्यको प्रमुख रहन्छिन।
यो विश्वास गर्नुहोस् वा नराख्नुहोस्, बरिबाडोस टापुमा रिहानाको एकदम नम्र शुरुआत छ। उनी लामो समयदेखि आइपुगेकी छिन्, अहिले एक प्रसिद्ध गायक, गीत लेखक, डिजाइनर, अभिनेत्री, र ट्रेन्डिंग ब्रान्ड फिन्टी ब्यूटीको पछाडि अनुहार, विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय मेकअप ब्रान्ड मध्ये एक। रिहाना प्रायः प्रसिद्ध टापुमा प्रसिद्ध क्रप ओभर कार्निवल उत्सवको लागि टापुमा यात्रा गर्छिन्, र जब उनी अवसर पाइन्छन् उनी टापुको प्रचार गर्छिन्। "रिरी", जसलाई उनी आफ्ना फ्यानहरू द्वारा चिनिन्छन्, सेप्टेम्बर २०१ in मा बार्बाडोसको लागि "राजदूत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एण्ड प्लेनपोटेन्टेरी" भन्ने उपाधिबाट सम्मानित भइन्।
समुद्री डाँडाको इतिहास
क्यारिबियन समुद्री डाँडाको इतिहास रोचक छ, र यो सबै एक काल्पनिक कथा मात्र होइन बेस्ट बेच्ने फिल्म सँगै राख्नको लागि सिर्जना गरिएको हो। समुद्री डाकूहरूले एक बिन्दुमा यस क्षेत्रको समुद्रहरूमाथि प्रभुत्व जमाए जसले त्यस क्षेत्रमा डरलाग्दो जहाजहरू निम्त्याए। बार्बाडोसका दुई कुख्यात समुद्री डाकूहरू साम लर्ड र स्टेडे बोननेट थिए। जहाँसम्म समुद्री डाँकुहरू गए, साम प्रभुलाई अधिक नवीनता दिएका थिए, किन कि उनले आफ्ना लुटिने तरिका किनारमा लगे। जहाजहरूलाई राजधानीमा लगिएको थियो भन्ने भ्रममा पार्न भगवानले नरिवलका रूखहरूमा लालटेनहरू राख्नुहुनेछ। धेरैले आफ्ना जहाजहरू चट्टानमा भत्काउँथे र पा Lord's्ग्राहरू प्रभुको विचलित योजनाहरूको लागि गतिशील थिए।
अर्कोतर्फ स्टेड बोनट समुद्री डाकूको भद्र पुरुष र निवृत्त बेलायती सेनाका मेजर थिए। उनी १ dark१1717 मा 'अँध्यारो' पक्षमा फर्किए, र आफ्नै समुद्री डाकू जहाज खरीद गर्नसम्म गए। उसको जहाजलाई "बदला" को रूपमा चिनिन्थ्यो, र उनले यसलाई न्यु इ England्ल्याण्ड कोस्टबाट यात्रा गरे। बाटोमा उनले कब्जा गरे र धेरै जहाजहरू जलाइदिए, र पछि क्यारिबियनमा फर्किए। उनले पौराणिक समुद्री डाकू ब्ल्याकबेरीसँग मित्रता गाँसे जसले एक पटक उनले आफ्नो जहाजको लगाम लगे, जुन पछि फिर्ता भयो। अन्ततः बोनट समातिए र १ hanging१1718 मा झुण्डिएर मारिए।
उड़ान माछा को भूमि
उडान उड्ने माछा बार्बाडोसमा लोकप्रिय क्याच हो, त्यसकारण यस टापु र उडान उड्ने माछाको सन्दर्भ हो, र माछाको यस प्रजाति टापुको राष्ट्रिय पकवान, कउ कउ र उडान माछामा चित्रित भएको कारण। कउ कउ र उडानमा माछालाई स्थानीय मसलाहरू र अन्य मसालाको माछाले उमालेर बनाइन्छ, र यसलाई कउ कउसँगै प्रस्तुत गरिन्छ, जुन कोर्नमेल र भिंडीले बनेको हुन्छ। त्यहाँ अन्य धेरै लोकप्रिय डिशहरू छन् जुन तपाईं बार्बाडोसमा हुँदा तपाईंको सबै समावेशी छुट्टीमा प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईं हाम्रो बारेमा अझ बढी सिक्न सक्नुहुनेछ। बार्बाडियन फ्लाग ब्लग!
क्रस ओभर फेस्टिवल
क्रप ओभर एक महाकाव्य हो क्यारिबियन कार्निवल उत्सव, र यसको सुरुवातसँग मौसमको अन्तिम उखु फसलसँग सम्बन्धित छ। यो औपनिवेशिक युगको लागि मिति हो, तर आज यो बार्बाडोसको ठूलो पार्टी हो, यस कार्यक्रममा भाग लिनका लागि धेरै व्यक्तिहरू यस टापुमा उडान गरिरहेका थिए। क्रप ओभरका लागि गतिविधिहरू जूनको रूपमा सुरू हुन्छ र अगस्टमा पहिलो सोमबारसम्म फस्दछ। क्रप ओवर घटनाको विस्फोटक समापनलाई ग्रान्ड कडोमेन्ट (कडोमेन्ट डे) को नामले चिनिन्छ। यसका साथै, दिन र रातको पार्टीहरू, यस समय वरिपरि तपाईंले शिल्प बजारहरू अन्तर्गत पाउनुहुनेछ, बच्चाहरूको परेड र अधिक। तपाईंले कस्ट्युममा नराख्नु भए पनि, क्रप ओभर ब्यान्डको साथ उफ्रनको लागि, ब्रिजटाउनको सडकहरूमा, कडोमेन्ट डेमा, तपाईं एक्शन प्याक बिदामा हुनुहुन्छ यदि तपाईं यस समयमा बार्बाडोस भ्रमण गर्नुहुन्छ भने।
सर गारफिल्ड सोबर्स बार्बाडोसमा जन्म भएको थियो
सर गारफिल्ड सेन्ट औबर्न सोबर्सको जन्म १ 1936 16 मा सेन्ट माइकल, बार्बाडोसमा भएको थियो। उनी विश्वको सबैभन्दा ठूलो जीवित क्रिकेट किंवदन्तीका रूपमा परिचित छन्। मैदानमा एक अलराउन्डर, सोबर्स १ 1958 वर्षको उमेरदेखि वेस्टइंडीज क्रिकेट टीममा खेल्थे। उनको उल्लेखनीय उपलब्धिहरूमध्ये १ 365 .1994 मा record XNUMX runs रन बनाएर विश्व कीर्तिमान स्थापित गर्दै छ, जुन आउट हुन सकेन। त्यो रेकर्ड अन्ततः १ XNUMX XNUMX in मा तोडिएको थियो, तर अझै सोबर्स बार्बाडोसमा एक राष्ट्रिय नायकको रूपमा रहेको छ।
स्थानीयले आफूलाई “बजान” भनेका छन्।
बजाजनहरू जसलाई चिनिन्छन् उनीहरू चरित्रले पूर्ण हुन्छन्, र प्रायः अति देशभक्त हुन्छन्। जब तपाईं उनीहरूलाई बार्बडियन कल गर्न चाहानुहुन्छ, प्राय: चाँडै सच्याईन्छ र तपाईंलाई सूचित गर्दछ कि तिनीहरू वास्तवमा वास्तवमै "बजान" हो। यद्यपि दुबै सर्तहरू सही छन्, विश्व "बजन" कुनै न कुनै रूपमा यस टापुका वासिन्दा व्यक्तित्वको व्यक्तित्वलाई समेट्न अझ राम्रो देखिन्छ। बार्बाडोसमा तपाईको सबै समावेशी बिदामा, तपाईले यस टापुलाई यसको उपनाम "Bim" बाट सन्दर्भित धेरै व्यक्तिहरू सुन्नुहुनेछ।
चटेल हाउसहरू साना, चल काठका घरहरू हुन्, जुन यस टापुको सम्पदासँग नजिकको सम्बन्ध हो। तिनीहरूको उत्पत्ति वृक्षारोपण दिनमा फिर्ता जान्छ, जब चल घरहरू खरीद गरिन्थ्यो, जुन एक सम्पत्तिबाट अर्कोमा सर्न सक्थ्यो। च्याटल घरहरू घरमालिकहरूसँग लोकप्रिय छन् जुन उनीहरू बस्ने जग्गाको स्वामित्व नहुन सक्छन्। यी घरहरू सामान्य रूपमा ब्लकहरूमा निर्माण गरिन्छन्, जसले तिनीहरूलाई आवश्यक परे जब सार्न सजिलो बनाउँदछ। बर्षौं पछि, यी प्रकारका घरहरू बार्बाडोसको केहि भागहरूमा अझ विस्तृत र अनौंठो डिजाइनहरूमा प्रमुख विशेषताको रूपमा जारी रहन्छ।
क्यारिबियनका साना साना टापुहरूको लागि बाँदरहरू विरलै पाइन्छन्, तर बार्बाडोसमा भने त्यस्तो छैन। हरियो बाँदर टापुमा साधारण दृश्य हो, र कहिलेकाँही बगैंचामा पप अप गर्दछ। स्थानीयहरू विश्वास गर्छन् कि हरित बाँदर S 350० वर्ष पहिले सेनेगल र पश्चिम अफ्रिकाको गाम्बियाबाट आएको थियो। समय बित्दै जाँदा, पश्चिम अफ्रिकाको तुलनामा बाँदरहरूले फरक सुविधाहरू विकास गरे। यदि तपाईं सेन्ट जोन, सेन्ट जोसेफ, सेन्ट एन्ड्र्यू वा सेन्ट थॉमस जस्ता स्थानहरूको भ्रमण गर्नुभयो भने बार्बाडोसमा हरित बन्दर भेट्ने सम्भावना तपाईंसँग बढी हुन्छ। यी बाँदरहरू शरारती र चंचल छन्, त्यसैले यदि तपाईं आफ्नोमा टहलिएको कसैले भेट्टाउनुभयो भने अचम्म नमान्नुहोस् सबै समावेशी रिसोर्ट!
सहूलियत पोइन्टबाट सुन्दर दृश्य
बार्बाडोस एक पर्वतीय टापुको रूपमा परिचित छैन, तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईं केही सहूलियत बिन्दुबाट आश्चर्यजनक दृश्यहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। सेन्ट एन्ड्र्यूमा माउन्ट हिल्बी उदाहरणका लागि, टापुको सब भन्दा उचाइ समुद्री सतहबाट १,११1,115 फिट माथि छ। स्कटल्याण्ड जिल्लाको फोटो सहित सबै समावेशी छुट्टी परिप्रेक्ष्य सहित शीर्षबाट हेराइहरू उत्कृष्ट छन्।
ग्यारिसन सवानाको बारेमा बेलायती एयर छ, र यो ठीक छ - यो बार्बाडियन परिदृश्यमा दृढ रूपमा जडित छ औपनिवेशिक युगदेखि, १1845। सटीक हुन। इतिहासले देखाउँदछ कि सेनाहरू एक पटक इलाकामा राखिएको थियो जहाँ ग्यारिसन सवानालाई ब्रिजटाउनमा भेट्न सकिन्छ, त्यसैले यो नाम। फेब्रुअरीको अन्त र मार्चको शुरुमा, ग्यारिसन साभनाह बार्बाडोस गोल्ड कपका लागि होस्ट खेल्छन्, एक राम्रो घोडा दौड जुन १ 1982 10२ देखि घटना क्यालेन्डरमा रहेको छ। यस बाहेक, यदि तपाइँ घोडा दौडमा उत्साहित हुनुहुन्छ भने, तपाईं उत्तम हुनुहुन्छ कुनै पनि तीन मौसममा; जनवरी-अप्रिल, मे-सेप्टेम्बर, वा नोभेम्बर-डिसेम्बर। यो घोडा दौडहरू हेर्न महँगो छैन, केही घटनाहरूको लागि टिकटको साथ १० बार्बाडियन डलर।
मोन्गिज प्राय: नेगल, वा स्टोट्ससँग तुलना गरिन्छ। तपाईं यी सानो आलोचकहरू सडक पार scurrying देख्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी यदि तपाईं बार्बाडोस ग्रामीण इलाकामा हरियालीले घेरिएको सडकमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरू साना, फिक्री जनावरहरू हुन्, जुन प्राय: खैरो र खरानी रंगको हुन्छन्, र उनीहरूलाई भारतबाट बार्बाडोसमा परिचय गरिएको थियो खास कारणका लागि: मुसा मार्न। त्यतिखेर मुसाको बढ्दो जनसंख्याले उखु उद्योगलाई असर गरिरहेको थियो तर यो योजना मुसाले रातो हो भन्ने महसुस गरे, जबकि मुंगूस भने छैन। जे भए पनि, त्यहाँ अझै टापुमा केहि मन्गिज छन्।
बार्बाडोससँग यो सबै छ र त्यसपछि केहि…
चाहे तपाई छुट्टी पाउन चाहानुहुन्छ जहाँ तपाईं आफैंलाई यस टापुको इतिहास र संस्कृतिमा पूरै डुबाउन सक्नुहुन्छ, कहिले नहुने आउटडोर साहसिक कार्य, वा एउटा रमाईलो समय जहाँ तपाईंले सोच्न आवश्यक सबै नै तपाईंको लागि हुन्छ अर्को ककटेल, तपाइँ ती सबै र अधिक बार्बाडोस र विशेष गरी सबै समावेशी छुट्टीको समयमा पाउनुहुनेछ। तपाईंको छुट्टीको समयमा प्राप्त हुने अनुभवहरूसँग, तपाईं निश्चित रूपमा विश्वको यस भागमा सम्पन्न अन्तरदृष्टिसहित टापु छोड्नुहुनेछ, जुन सबैभन्दा उच्च मूल्या rated्कन गरिएको छुट्टी गन्तव्यहरू मध्ये एक हो। एउटा बुक गर्नुहोस् बार्बाडोसमा स्यान्डलहरू समावेशी रिसोर्टहरू, र तपाइँ एक राम्रो समय ग्यारेन्टी हुनेछ!
दृष्टि, शक्ति, पैसा: अफ्रीका पर्यटन रिकभरी ...
मास्को शेरेमेतिभो एयरपोर्टले नयाँ समाधानको लागि विकास गर्दछ ...
बुक र यात्रा सैंडल रिसोर्ट्स मा आत्मविश्वास संग
थाईल्याण्ड, पर्यटन, र गाढा रातो क्षेत्रहरु: राम्रो खबर छैन
Lufthansa राजधानी मा थप तरलता सुरक्षित ...
स्यान्डल रिसोर्ट्स अन्तर्राष्ट्रिय संस्थापकको सम्झना गर्दछ ...
भारतले आफ्नो एयरलाइन्सको क्षमता पूर्वको %५% ...
संयुक्त एयरलाइन्स: इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट उडान लिन सेट गरियो ...